बीच सडकमा कार हल्लिरहेके देखेर प्रहरी पुग्दा …. यस्तो भयो !!! – News Nepali Dainik
बीच सडकमा कार हल्लिरहेके देखेर प्रहरी पुग्दा …. यस्तो भयो !!!
प्रकाशित मिति: मंगलबार, चैत्र १७, २०७७ समय: १३:३८:५१
सडक छेउमा रोकिएको एक कार हल्लिरहेको थियो । भारत, उत्तर प्रदेशको गोरखपुर सडक किनारमा रातो रंगको कार अचानक गोरखपुरको नक्षत्र क्षेत्रमा शनिबार साँझ समुद्री यात्राको नजिकै हल्लिन थाल्छ । यो देखेर त्यहाँ उपस्थित प्रहरी र अन्य मानिसहरु कारको नजिक पुगे । भित्र हेर्दा, कारमा बसिरहेका प्रेमी जोडीहरू शारीरिक सुखभोगमा रमाइरहेका थिए । यसै बीच प्रहरीलाई देखेर उनीहरु गाडी लिएर भाग्न थाले ।
तिनीहरूको गतिविधि रंगेहात फेला परेपछि, प्रहरीहरूले कन्ट्रोल रूममा सूचना दिए, पछि सम्पूर्ण जिल्लामा जाँ’च सुरु भयो । खोबर प्रहरीले सूचनाको आधारमा उक्त युवक र कारमा सवार महिलालाई नियन्त्रणमा लिएको छ । प्रहरी शनिबार साँझ ५ बजेतिर नौका केन्द्रमा गस्ती गर्दै थिए ।
Last Updated on: March 30th, 2021 at 1:38 pm